समाजमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिमा परिवर्तन आउनु पर्छ : Samikaran News
समाजमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिमा परिवर्तन आउनु पर्छ
समिकरण २०७८, २३ फाल्गुन सोमबार २०:२८ पढ्न लाग्ने समय3मिनेट
अन्जली पाण्डे, अध्यक्ष
महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको जिल्ला सञ्जाल, नुवाकोट
महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको जिल्ला सञ्जाल, नुवाकोटको अध्यक्षको दोस्रो कार्याकालमा रहेकी अन्जली पाण्डे, अन्य विभिन्न संघसंस्थामा पनि आवद्द भएर सक्रिय छिन् । सामाजिक गतिविधिमा क्रियाशिल पाण्डे, जेसिस, सहकारी, लायन्स क्लब लगायत संस्थामा आवद्द भएकी छिन् । २०५८÷५९ देखि विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गरेकी पाण्डे हाल, नेपाली कांग्रेसको भगिनी संस्था नेपाल महिला संघको विदुर नगरसमितिको सभापति रहेकी छिन् । नुवाकोट जेसिस वर्ष २०२१ र नुवाकोट लायन्स क्लब अफ उपकारको उपाध्यक्ष समेत पाण्डेले साहायता सामाजिक संस्थामा रहेर डेढदशकभन्दा धेरै समय काम गरेकी छिन् । महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको जिल्ला सञ्जाल, नुवाकोटको अध्यक्ष रहेकी पाण्डेसँग ८ मार्च महिला दिवसको सन्दर्भमा त्रिशूली खबरका लागि गरिएको कुराकानी ।
महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको सञ्जाल भनेको को हो ? यसले के काम गर्दै आएको छ ?
महिला मानव अधिकार रक्षक संजाल भनेको नितान्त महिलाहरुको एउटा लुज फोरम हो । यसले हिंसा पिडितको विषयमा न्यायको लागि दवाव सृजना गर्दछ । अन्यायमा परेकालाई न्यायको बाटो देखाउँछ । आवाज विहिनको आवाज बनिदिन्छ । हिंसा सहने होइन प्रतिकार गरौँ भन्ने सन्देश दिन्छ देशको हरेक कुना कन्दरामा बस्ने हरेक नेपाली महिलालाई आफ्नो हक र अधिकारको लागि लड्न मद्दत पुराउदै आएको छ ।
जिल्लामा महिलामाथि हुने हिंसा र बलात्कारका घटनाहरु कमि आउन नसक्नुको कारण के हो भन्ने लाग्छ ?
समाजमा अझै पनि महिलाहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुन सकेको छैन । सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक रुपले पनि जिल्लामा महिलामाथि हिंसा भइरहेको छ । महिलाहरुले सहेर बस्ने र पीडा व्यक्त गर्ने बानी नहुदा समस्याहरु बढिरहेको छ । सामाजिक सचेतनाको खाँचो रहेको छ । समाजले महिलालाई आफ्नो छुट्टै अस्तित्व छ भन्ने स्वीकार नगरेसम्म हिंसाका घटनामा कमि नआउन सक्छ । त्यसैले हरेकले महिलामाथि हुने हिंसाको विरोध गर्न पर्छ र हिंसा पीडितको पक्षमा आवाजमात्र उटठाउने होइन, उनीहरुलाई समाजमा पुनस्र्थापना गराउन पनि सहयोग गर्नु पर्छ ।
पीडित महिलाहरुको लागि तपाईको संस्थाको भूमिका के रहने गर्दछ ?
हाम्रो सस्था लुज फोरम हो । पिडित महिलाको लागि हाम्रो संस्थाले स्वतन्त्र रुपमा न्यायको ढोका ढक्ढढकाउन सहकार्य र समन्वय गरिरहन्छ । कसैको दवाव र प्रभावमा पर्दैन । स्वतन्त्र रुपमा पिडितको पक्ष लिने गर्दछ । पीडितहरुलाई न्याय दिलाउनको लागि न्यायिक निकाय, प्रहरी र स्थानीय प्रशासनसँग समन्वयका कामहरु पनि गरिरहेको छ ।
महिला माथि हुने हिंसाका घटनाहरुलाई शुन्यमा झार्न के गर्नु पर्ला ?
तत्कालको लागि महिलामाथि हुने हिंसा शून्यमा झार्न त सकिदैन त्यसलाई न्यूनिकरण गर्ने हो । हिजोको तुलनामा आज घटनाहरु बढि प्रहरीमा दर्ता हुन्छन् त्यसले गर्दा घटनाहरु बढेको अनुभव भएको हो । तर, पहिलेको तुलनामा महिलाहरु पनि सचेत भएका छन् । आफू अन्याय सहेर बस्नु हुँदैन भन्ने चेतना आएको छ । पुरुषहरुले महिलालाई बस्तुको रुपमा हेर्ने दृष्टि बदल्नु पर्छ भने महिलाले पनि आफूमाथि हुने गरेका हिंसाको प्रतिकार गर्न, हिंसा भएमा न्यायिक निकायमा आउन डराउन हुँदैन । र बालिकाहरुको सुरक्षाको लागि परिवारले ध्यान दिनु पर्छ । उनीहरुलाई परिवार र विद्यालयले हिंसा भनेका के हुन् रु र यसबाट जोगिने उपायको बारमा पनि जानकारी दिनुपर्छ ।
नारी दिवस आएको छ । अधिकारकर्मीहरु पनि एकदिन दिवस तामझाम गरेर मनाउने र बाँकी ३६४ दिन महिलाविरुद्द नै हिंसा र शोषणको विषयमा चुईक्क नबोल्ने गर्दछन् भनिन्छ नि ?
यो गलत हो किनभने हल्लाको पछि नलाग्नु होला । किनभने हामी नुवाकोटमा हाम्रोमात्र संस्था होइन महिला तथा बालवालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने । सरकारी तथा गैर सरकारी संघसस्थाको छुट्टै अर्को सञ्जाल छ । निरन्तर त्यस्ता संघसस्थास्थाहरुले महिलाको पक्षमा गतिविधिहरु संचालन गरिरहेको छ । हामी बिना बर्दीका हतियारका सिपाहि हौँ । ३६५ दिननै हामी पिडितको पक्षमा हुन्छौँ ।
तपाई नेपाली कांग्रेसको राजनितिमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ । पार्टीगत राजनीति र महिला मानवअधिकारको पक्ष क्रियाशिल हुँदा राजनीतिको कारण पीडित झनै पीडित हुन सक्ने खतरा रहन्छ नि ?
पार्र्टीप्रति आस्था राख्नु सबैको अधिकारको कुरा हो । हरेक मान्छे एउटा न एउटा पार्टीसँग जोडिएको हुन्छ नै । म पनि नेपाली कांङग्रेसमा आस्था राख्दछु । यसले गर्दा महिलाको क्षेत्रमा काम गर्न झनै बढी सहज भएको छ । हरेक राजनिति गर्ने व्यक्तिले गलतलाई गलत र सहिलाई सहि भन्ने हिम्मत राख्नु पर्दछ । म त्यहि सिद्धान्तमा अडिग छु । पिडितलाई न्याय दिलाउने जात, धर्म, लिङ्ख, पार्टी आफ्ना –पराई केही हेरिदैन । यसरी हेर्न थालियो भने त त्यो मानव अधिकार रक्षक नै हुन सक्दैन ।
स्थानीय तहको निर्वाचन आउन लागेको छ । अब हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाई विदुर नगरपालिकाको उपमेयर पदमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा कुरा बाहिर आएको छ नि ?
म सामाजिक र राजनितिक रुपमा सक्रिय छु । त्यसकै कारणले पनि बाहिरकोले मेरो मूल्यांकन गरेको हुन सक्छ । पार्टीले योग्य ठानेर अवसर दियो भने मेरो लागि स्वीकार्य हुनेछ । पार्टीले योग्य ठानेमा र त्यसपछि जनताले पनि योग्य ठानेमा म महिलाको पक्षमा सशक्त आवाज उठाउने ठाउँमा नै पुग्नेछु । यसबाट अधिकारकर्मीहरुको थोरै भए पनि आत्मविस्वास बढाउन मेरो भूमिका रहनेछ । नगरको कुनै पदमा रहे पनि नरहे पनि निरन्तर रुपमा राजनैतिक तथा सामाजिक रुपमा सक्रिय रहनेछु।
प्रस्तुति ः भगवती लामा